किन दर्शक फ़काउदै हिडे त ‘मारुनी’ फिल्मका टिम? | Screennepal
किन दर्शक फ़काउदै हिडे त ‘मारुनी’ फिल्मका टिम?
२०७६, ७ भाद्र शनिबार १०:०९screennepalUncategorized0
अभिनेता पुष्प खड्का र अभिनेत्री साम्राज्ञी आरएल शाह दर्शक फकाउन देश दौडाहामा निस्किएका छन् । भाद्र १३ गतेबाट प्रदर्शन हुन लागेको फिल्म ‘मारुनी’ को विषयमा जानकारी दिने उद्येश्यले उनीहरु अहिले देशै भर हिडिरहेका छन् । यसको सुरुवात सुनसरीको इटहरीबाट गरिएको छ । बुधबार इटहरीमा भएको भव्य कन्सर्टमा पुष्प र साम्राज्ञीसँगै निर्मात्री पुनम गौतम, निर्देशक नवल नेपाल र गायक कृष्ण काफ्लेले दर्शकसँग अन्तरक्रिया गरे ।
उक्त कन्सर्टमा पुष्प र साम्राज्ञीले फिल्म मारुनीमा समावेश गीत ‘जाम न माया जाम र सक्दिनँ म बाँच्न’ मा आफ्नो प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थिए । दुईले दर्शकको आग्रह स्वीकार गर्दै निकैबेर सेल्फीमा लिनमा पनि समय खर्चीए । कन्सर्टमा ‘मारुनी’ जोडीको क्रेज गजब देखिएको थियो । कार्यक्रममा स्थानिय मोडलहरुले फिल्मको टि-सर्टमा र्‍याम्प वाक समेत गरेका थिए ।
कन्सर्ट पूर्व स्थानीय सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अभिनेता पुष्पले लभ, रोमान्स र एक्सनको त्रिवेणी फिल्ममा रहेको कुरा बताए । त्यस्तै, अभिनेत्री साम्राज्ञीले फिल्मको कन्टेन्ट स्तरीय रहेको र ट्रेलर सार्वजनिक भएपछि राम्रो प्रतिक्रियाहरु आएकोमा खुसी व्यक्त गरिन् । इटहरीवासी निर्देशक नेपालले फिल्म राम्रो बनाउन भरपुर टिमले प्रयत्न गरेको बताए । निर्माता गौतमले फिल्म उत्कृष्ट बनेको बताइन् ।
फिल्ममा सह-निर्मातामा राजा प्रधान, दर्शन केसी र मिना क्षेत्री पनि छन् । गोविन्द फुँँयाल र निर्देशक नेपालले फिल्मको कथा लेखेका हुन् । फिल्मलाई संजय लामाले क्यामेरामा कैद गरेका हुन् । रेविका गुरुङ, शुशील क्षेत्री, अर्जुन श्रेष्ठ, विनोद भट्टराई, शंखर सेढाइलगायतका कलाकारहरुको पनि यस फिल्ममा भूमिका रहेको फिल्मलाई मित्र डि.गुरुङले सम्पादन गरेका हुन् ।a फिल्म त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित छ ।
Previous Postकलाकारद्वारा रविको रिहाईको माग Next Postसलमान र अमिर खान एउटै फिल्ममा आउदै